Sunset နှင့် ပတ်သတ်သောရှာဖွေမှုရလဒ်ZEKKEI Japan(1/7)
Come check out the best spots for seeing the setting sun in Japan. We have destinations for all the colors of the evening sky, dyed in oranges, purples, and pinks as the sun sinks behind the mountains or below the sea. These vistas are definitely worth the trip.
ဂျပန်တွင် ထူးခြားသော အကအိဆိုဘက ၄.၂ ခန့် ကျယ်သော ဧရိယာတစ်ခွင်တစ်ပြင်လုံးတွင် ပန်းများပွင့်စေပါသည်။ အဝေးတွင်ရှိနေသော ဟိမရယဒေသမှ သယ်ဆောင်လာေ...